Maoritania: Mpitoraka Bilaogy iray Voaheloka Ho Faty Noho Ny Fanakianana Ny Fankavakavahan-tsaranga Manjo ireo Manefy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Septambra 2016 4:42 GMT
Vakio amin'ny teny Português, English, English, Español, Tetun, Français
Ao avy amin'ny tranonkala Ibn kafka izay nanamafisan‘ ilay mpitsara hoe ”raha vita amina fahoriana sy tsy fahamarinana ny tantara maoritanianina, dia vita avy amina fanoherana sy fahamendrehana azo alain-tahaka ihany koa izy”
Nohon'ny fanoratana lahatsoratra fohy tao amin'ny aterineto nitsikeràna ny fampiasana ny fivavahana silamo mba hanamarina ny tranga fahiny momba ny rafitra saranga, nohelohin'ny Fitsarana Heloka Bevava ao Nouadhibou, Maoritania, ho faty ilay mpitoraka bilaogy Mohamed Cheikh Ould Mohamed Ould M'kheitir.
Zanaky ny mpiadidy ny tanàna, renivohitra ara toekaren'ny faritra atsimon'ny firenena, Mohamed Cheikh Ould Mohamed Ould M’kheitir dia nianatra fitantanam-bola ary 29 taona, avy amin'ny sarangan'ny mpanefy. Nanao fampakarana didy momba izany fanamelohana izany izy. Tao anatina lahatsoratra fohy nozaraina tao amin'ny tranonkala chezvlane.com, nosoratany ny 25 desambra 2014:
Ireo sahy mamorona hadita (fanamarihana: hafatra am-bava nampitain'ny mpaminany) diso ary lazaina fa avy amin'ny mpaminany (fiadanana sy famonjen'i Allah ho aminy), tsy misy fitondrantena na fivavahana afaka manakana azy handika ho amin'izay fandraisany azy ny lahatsoratra nosoratana tanora iray, tsyampy traikefa koa fanampin'izany. Tsy mba hanao ezaka izy ireo mba hanetsehana ny fitiavan'ny silamo iombonana mba hanompo ny tombotsoany. Toy izany no nilazan'izy ireo fa ireo mpanefy dia niteny ratsy ny mpaminany (fiadanana sy famonjen'i Allah ho aminy) tamin'ny alalan'ny lahatsoratra iray nosoratan'ny iray tamin'izy ireo, toy ny nilazany ihany fa mpanefy ilay nanintsana ny nifin'ny mpaminany nandritra ny ady tao amin'ny vohitra Ouhoud.
Anatin'izany lohahevitra izany no tiako hanamarinana izao voalaza manaraka izao :
1. Na nahatsiaro tena na tsia aho, tsy niteny ratsy ny mpaminany (fiadanana sy famonjen'i Allah ho aminy) ary tsy ho ataoko mihitsy izany. Izaho rahateo mino koa fa eto an-tany tsy misy manaja azy indrindra noho izaho (fiadanana sy famonjen'i Allah ho aminy).
2. Ireo zava-misy sy tantara notanisaiko tao anatin'ny lahatsoratro teo aloha dia mitafy toetra ara-tantara sy fahamarinana. Ireo tantara ireo dia mazava ho azy fa manana ny dikany ara-bakiteny sy amin'ny endrika ivelany fotsiny ary ny dikany kendrena sy lalina.
Mohamed Cheikh Ould Mohamed, nozaraina tao amin'ny ODH Maoritania
Ny 21 Aprily 2016, ny Fitsarana Avo ao Nouadhibou dia nanamafy ny fanamelohana ho faty, kanefa, niaraka tamin'ny famerenana nandinika ireo porofo. Eny tokoa, tsy heveriny ho mpivadi-pinoana intsony izy, fa toy ny tsy mpino fotsiny.
Miaraka amin'io famerenana nandinika ny porofo amin'ny fiampangana azy io, mbola misy ny fanantenana eo amin'ireo mpitolona ho an'ny zon'olombelona ao Maoritania, hoe horavàn'ny Fitsarana Avo, izay nangatahan'ny fiarovana azy, ny fanamelohana ho faty ary hanonona sazy fanamelohana mandefitra kokoa.
Mampatsiaro ireo zava-nitranga ny tranonkala senegaley Setal :
Ny Alakamisy teo, tsy narahan'ny fitsarana avo dia ny fiampangana izay nangataka fanamafisana ny sazy. Miarahaba ny tenany ireo mpisolovava na dia mazava amin'izy ireo aza hoe mbola tsy ampy izany. Efa roa taona sy telo volana izao i Mohamed Cheikh ould Mkheitir no nosamborina noho ny lahatsoratra iray nozarainy tamin'ny aterineto. Izany lahatsoratra izany dia noheverina fotsiny ho manompa ny mpaminany sy ny Silamo, nahatohina ny ankolafy tena mpitahiry ny nentin-drazana maoritanianina izy io, izay niarahaba ny fanamelohana azy ho faty tamin'izay fotoana izay.
Fa mety mbola hahazo sazy mafy noho ny antony politika anatiny ilay mpitoraka bilaogy. Eny tokoa, tao anatina lahatsoratra nivoaka tao amin'ny tranonkala Amnesty International, ny 26 Aprily 2016, ny mpanao gazety sy mpitolona ho an'ny zon'ny olombelona, Sabine Cessou dia manoratra, mitanisa mpiara miasa aminy manafina ny anarany:
ilay raharaha manontolo dia resaka ”politika anatiny, miaraka amina tribonaly maniry ny hanome sazy ho an'ireo salafista — fironana manomboka mitombo ao amin'ny firenenay, toy ny any amin'ny tontolo arabo-silamo rehetra”.
Anatin'ny fanambarana iray momba ilay raharaha, ny Federasiona Iraisam-pirenenan'ny zon'ny Olombelona (FIDH) dia mitanisa an'i Me Fatimata Mbaye, filohan'ny Fikambanana Maoritaniana miaro ny zon'olombelona (AMDH), filoha lefitra fahiny tao amin'ny FIDH ary mpisolo vava ireo mpitolona manohitra ny fanandevozana:
Io fanamelohana io, ny voalohany ho amina ”fivadiham-pinoana” ao Maoritania nanomboka tamin'ny fahaleovantena, dia midika fihemoran'ny fandeferana ary mampiseho hoe hatraiza no maha-fady ao Maoritania ny resaka saranga, fivavahana, fanandevozana ary demokrasia. Hitantsika ny fihamafisan'ny fahefana sy ny fiarahamonina manohitra ireo feo rehetra mandà ireny olana ireny.
Taorian'ny famoahana ilay lahatsoratra, ireo mpino mahery fihetsika dia namporisika ny hevi-bahoaka mba hangataka ny hanantonana an-tady ilay bilaogera. Faritan'ny tranonkala senegaley Leral ny rivo-piainana niforona tao amin'ny firenena nanohitra ilay voampanga:
Nikapoka ny rarivato ireo Maoritanina an'arivony tao Nouakchott, Nouadhibou, ary tany an-kafa, izay ny ankamaroany namaky, ny sasany tsy namaky mihitsy ilay lahatsoratra voampanga, mba hitaky an-kitsirano ny fanantonana tsotra izao fotsiny ny tenany, herintaona lasa izay…[Ny] filohampirenena, nanoloana ireo olna marobe nanao fihetsehana nivory teo ivelan'ny vavahadin'ny lapa nilaza hoe:” Misaotra anareo rehetra amin'ny foko aho tamin'ny fivondronanareo goavana eto amin'ity toerana ity mba hanamelohana ilay nanao heloka bevava tamin'ny finoana silamo, ny finoan'ny vahoakantsika, ny firenentsika, ny Repoblika Islamikan'i Maoritania, toy ny efa tsy maintsy nohazavaiko teo aloha ary mbola hamafisiko indray androany, dia tsy laika ary tsy ho izany na oviana na oviana… Lazaiko aminareo fa ny Fanjakana sy izaho tenako dia tsy hitandro hasasarana hanao ezaka mba hiarovana io fivavahana io ary ireo mari-pamantarana masina…” Manenjika azy ankehitriny izany tenin'ny Filoha izany, sy ny an'ireo avy amin'ny antoko politika isan-karazany ampiarahana amin'ireo fihetsiketsehana sy ny fatwas.
Ny fanohanana nomeny ilay mpitoraka bilaogy dia nanintona ny hatezeran'ireo mahery fihetsika ho amin-dramatoa Aminetou Mint Moctar, nahazo ny loka momba ny zon'olombelona tamin'ny 2006 avy amin'ny Repoblika Frantsay ary tamin'ny 2010, ny medalin'ny Chevalier de la Légion d’honneur frantsay. Nisy fatwa navoaka mba hanenjehana ity olona ity, izay, toy ny navoakan'ny tranonkala Africa News, vehivavy maoritanianina voalohany natolotra hahazo ny Loka Nobel ho an'ny fandriampahalemana noho ny firotsahany hiasa ho an'ny zon'olombelona.
M. Yehdhih Ould Dahi, lehiben'ny hetsika islamista ifotony ””Ahbab Errassoul” (ireo naman'ny mpaminany) dia nilaza araky ny tranonkala w41k.com:
«Io ramatoa ratsy saina miaro an'i Mkheitir io amin'ny filazana azy ho toy ny gadra noho ny fihevitra, ary nangataka ny famotsorana azy mba haverina amin'ny vadiny, io vehivavy io izay mamaritra ireo naman'ny mpaminany ho toy ireo Boko Haram sy Takfiris fotsiny satria mangataka ny fanajana ny voninahitry ny mpaminany izy ireo, ho helohin'i Allah, ireo anjely ary ny olona rehetra anie izy. Ankehitriny, lazaiko aminareo miaraka amin'ny fahasoavan'i Allah, ny fivadiham-pinoany tamin'ny fanaovany tsinontsinona ny voninahitry ny Mpaminany. Jentilisa io, izay azo atao ny mandatsaka ny ràny sy ny maka ny fananany. Izay mamono azy na manala ny masony dia hahazo valim-pitia avy amin'Allah ».
Ny rivotra iainana manodidina ity raharaha ity dia toa manome toky, fa ny azo antoka aloha dia mbola manan-kery ny fanamelohana ho faty an'ilay mpitoraka bilaogy, Mohamed Cheikh Ould Mohamed Ould M’kheitir, ary izy dia mbola miforitra ao am-ponja.